lundi, 27 janvier 2020 23:05
RN44: Hatomboka ny asa fanarenana taorian’ny andro ratsy
Nidina taty amin’ny faritra Alaotra Mangoro ny delegasiona notarihin’ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany, nijery ireo distrika tena voamafy sy ny vahoaka tra-boina, vokatry ny rotsak’orana niteraka tondra-drano nitranga tamin’ny herinandro lasa teo. Nivoitra tamin’ity dia ity fa hatomboka rahampitso ny asa fanarenana ny RN44, ary ny alakamisy kosa ny RN3A, mba hamerenana ny famatsiana ny solika izay iankinan’ny sehatry ny famokarana.
lundi, 27 janvier 2020 22:50
Fanampiana ireo traboina: Nitondra ny anjara birikiny Faneva Ima sy Nicolas Dupuis
Nifandimby tonga teny amin’ny BNGRC Antanimora, nitondra ny anjara birikiny ho an’ireo Malagasy niaram-boina noho ny ranobe, ny fianakavina Andriatsima Faneva IMA, kapitenin’ny Barea teo aloha, nanome vary 30 gony. Ny rainy sy ny anabaviny no nisolotena azy nanatitra ny fanomezana. Tonga teny ihany koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea nanatitra vary 20 gony. Teo koa Rakotoarivony Arsène nanolotra vola 100 000 Ariary sy Randrianandrasana Andrianitafika izay monina any ivelany nanome akanjo fitafy roa fatorana. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 27 janvier 2020 22:15
Mpanao gazety: Nitondra am-bavaka ireo traboina
Ho fiaraha-mientana ho an'ireo traboina tany amin'ny faritra dia nanatontosa fotoam-bavaka ny mpanao gazety, izay natao teny amin'ny Katedraly Analakely io maraina io. (Jereo sary Tohiny)
lundi, 27 janvier 2020 20:29
Ny Rado RAFALIMANANA: Hanolotra fanampiana ho an'ireo traboina eto Madagasikara
Efa miandry any ny fanampiana aman-taonina maro izay atolotry ny ONG WFDP hanampiana ireo traboina any amin'ny faritra, araka ny fanambaran'andriamatoa Ny Rado RAFALIMANANA tamin'ny mpanao gazety. Efa vonona ny fiaramanidina hitondra an'io fanampiana io ho eto Madagasikara izay hiandrasana ny fanapaha-kevitry ny avy eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblikan'i Madagasikara. Asa fanampiana no atao hoy ity farany ka tsy ilaina ny resabe, ka dia manolotra izany hantsitrapo ny tenany sy ny avy amin'ny fikambanana misy azy. (Jereo Sary Tohiny)
Hatraiza moa ny herin'ny "Filazana" avoakan'ny minisitry ny ati-tany mandrara ny Malagasy, ny fikambanana hanao hetsika hanangonam-bola hanampiana ny mpiray Tanindrazana? Lalàna no nanome alalana ny fikambanana hitady vola, ka ny volan'ny fikambanana tsy zaraina amin'ny mpikambana fa anaovana ny asan'ny fikambanana. Ny vondrom-bahoaka voatendry no eo ambany fiadidian'ny ministeran'ny Atitany, fa tsy ny Malagasy. Raha misy ny hanao Télé-thon, ny fanaovana fivoriana angamba no ilana fierana, fa izay hanangom-bola, na hanao rakitra, na hanangona fanampiana tsy misy afaka andrara izany, fanaparam-pahefana ny ambonin'izany, satria ny "Filazana" 'ny minisitra tsy ambony noho ny lalàna sy ny fahalalahan'ny olom-pirenena arovan'ny Lalampanorenana.
Nanome baiko ny sampan-draharahara miadidy ny ranomasina na APMF Anosy fa tsy maintsy atao fizahana daholo ny sambo mihantsona, na tsy avy any amin’ny firenena misy an’ilay valanaretina « coronavirus » aza, mba hisorohana ny valan’aretina. Nanao fanaraha-maso teo anivon’ny seranan-tsambon’i Ehoala Tolagnaro ny avy eo anivon’ny ministeran’ny fahasalamana amin’ny fitsapana hafanana ireo mpizahatany miisa 1020 tonga teto Tolagnaro androany. Ny sambo MS Artania niainga avy atsy Richards Bay - Afrika Atsimo, hiazo an’i La Réunion no nitondra ireto mpizahatany ireto. (Jereo Sary Tohiny)